Abakhiqizi be-nitrile gloves, amagilavu ​​we-Wholesale nitrile, amagilavu ​​we-nitrile ngokwezifiso - i-Glove enhle
I- “Fine glove company” ekhethekile ekukhiqizeni nasekuthumeleni amagilavu ​​e-nitrile alahlwayo ukuze ahlolwe ngokwezokwelapha kanye nokusetshenziswa kwezinjongo eziningi. sineziqu kuzo zombili izigaba ukukhiqizwa kwemishini yezokwelapha i-I & II, nethimba elihle kakhulu elinolwazi lokukhiqiza nokulawulwa kwekhwalithi. Isabelo ngasinye sezimpahla sizohlolwa ngokuqinile ngaphambi kokulethwa ukuqinisekisa ukuthi ikhwalithi ihlala ilungile njengoba kuceliwe.
Yiba nokukhiqiza okuhle kakhulu nokulawulwa kwekhwalithi ithimba elinolwazi
Ifanelekele i-ISO13485 (Uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi yedivayisi yezokwelapha), i-BSCI (ukucwaningwa kokuhambisana nomphakathi)
Ukuvakasha Kwethu Kwefekthri
Sineziqu kuzo zombili izigaba zokukhiqizwa kwemishini yezokwelapha i-I & II
112021 / Meyi
IMalaysia yenza ama-glove amathathu kwezine kwezingu-4 emhlabeni. Amafektri asebenza e-ha ...